Let's Bake Katy Perry's World's Best Cherry Pie - by Shop App MM
Let’s Bake Katy Perry’s World’s Best Cherry Pie0247
ကမ္ဘာကျော်ရဲ့ တေးသံရှင် Katy Perry က ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ Bon Appétit သီချင်းကို promote ရန်အတွက် သူမကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ Cherry Pie ပြုလုပ်နည်းကို ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ ထို recipe သည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းပြန့်နှံ့ပြီး လူကြိုက်များခဲ့ပြီး သူမပရိတ်သတ်များနှင့် ဟင်းချက်ဝါသနာရှင်အများအပြားကပါ လိုက်လံပြုလုပ်ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် အိမ်မှာနေရင်း နွေရာသီပိတ်ရက်များမှာ Katy Perry ရဲ့ Cherry Pie မုန့်ကို ပြုလုပ်စားနိုင်ရန် Shop App MM ချစ်သူများနဲ့ မျှ‌ဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
Recipe တွင်ပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းများနှင့် တခြားသောလိုအပ်တဲ့ ကုန်ခြောက်များကို Shop App ရှိ Shop Mart တွင် “ဒီနေရာကိုနှိပ်ပြီး” လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
* ဂျုံမုန့် – ဆန်ချိန်ခွက် ၂ ခွက်ခွဲ
* ထောပတ် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၂၀ ဇွန်း
* ရေခဲရေ ၁ ခွက်ခွဲ
Cherry Filling ပြုလုပ်ရန်ပါဝင်ပစ္စည်းများ
* ထပ်ခြမ်းခွဲထားသော ချယ်ရီသီး ၆ ခွက်စာ (သို့မဟုတ်) စည်သွပ်ဗူးချယ်ရီ အနှစ်ဖြင့်လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
* ထောပတ် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ ဇွန်း
* သကြား – ခွက်ဖြင့် ၄ ပုံ ၃ ပုံ
* ရေ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်း
* ပြောင်းမှုန့် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ ဇွန်း
Katy Perry ရဲ့ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး Cherry Pie မု့န်ရဲ့ ဂျုံသားပြုလုပ်ရန်အတွက်ဆို နှစ်သက်ရာဂျုံမှုန့်နဲ့ ထောပတ်ကို အတုံးလေးတွေဖြစ်တဲ့အထိ လက်ဖြင့်နယ်ပေးပါ။ ရေ စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်းစီချင်းထည့်ပြီး အချိန်ယူကာ ဂျုံသားအိပြီး ရောသွားတဲ့အထိ ဖြေးဖြေးချင်းနယ်ပေးပါ။ ထို့နောက် ဂျုံလုံး ၂ လုံးကို ညီညာပြန့်ပြူးအောင်ခွဲပြီး Plastic Wrap အုပ်ကာ ‌အအေးခံထားပါ။
***ဒီအဆင့်တွင် ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုထားတဲ့အနှစ်ကိုအသုံးမပြုဘဲ ချယ်ရီအနှစ်စည်သွပ်ဗူးကို အစားထိုးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။***
ထောပတ် စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ ဇွန်းကို ၁၂ လက်မပတ်လည်ရှိ မကပ်ဒယ်အိုးတွင် ထောပတ်ပျော်ဝင်သည်အထိအပူပေးပါ။ ထို့နောက် ဆန်ချိန်ခွက်ဖြင့် သကြား ၄ ပုံ ၃ ပုံထည့်၍ မွှေပေးပါ။ ပြီးလျှင် စိပ်ထားသော ချယ်ရီသီးများကို ၈ မိနစ်ခန့် အိနေအောင်မွှေပေးပါ။ ထို့နောက်၊ ရေ စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်းနဲ့ဖျော်စပ်ထားသော ပြောင်းမှုန့်ရေအနှစ် (Cornstarch) ကိုထည့်၍ အနည်းငယ်မွှေပြီး အအေးခံထားလို့ရပါပြီ။
ထို့နောက် .. အအေးခံထားသော ပထမဂျုံပြားကို ဂျုံမှုန့်ဖြူးထားသောစားပွဲပေါ်တွင် Roller ဖြင့် ၁၁ လက်မ ပတ်လည်ခန့် လှိမ့်ပေးပါ။
၉ လက်မ ပတ်လည်ခန့်ရှိ ပိုင်မုန့်ဖုတ်မယ့်ခွက်ထဲသို့ ဂျုံပြားကိုထည့်ပြီး အပေါ်မှ ချယ်ရီအနှစ်လောင်းထည့်ပါ။
ဒုတိယဂျုံပြားကို ပိုင်မုန့်အပေါ်မှ ဖုံးအုပ်ပြီးအလှဆင်ရန် စိတ်ကြိုက် အစင်းပုံကြောင်း‌လေးတွေလှီးပြီး ပိုင်မုန့်ပေါ်တွင် ဖုံးအုပ်အလှဆင်ပေးပါ။
ထို့နောက် .. Oven ထဲတွင် ကို အပူချိန် 375°F (သို့မဟုတ်) 190°C ဖြင့် ၁ နာရီခန့်အထိ ဂျုံသားရွှေရောင်သန်းလာတဲ့အထိ အပူပေးပါ။
နောက်ဆုံးမှာ‌တော့ အအေးခံပြီး Katy Perry ရဲ့ Bon Appétit သီချင်းလေးဖွင့်ပြီး ချိုမြိန်စွာ သုံးဆောင်လို့ရပါပြီ။
WORLD’S BEST CHERRY PIE by Katy Perry
INGREDIENTS FOR A GOLDEN CRUST
– 20 tablespoons salted butter (cubed)
INGREDIENTS FOR A JUICY FILLING
–6cups sweet cherries (pitted)
1. To make the most delicious golden curst: combine the flour, butter and massage using hands until the mixture resembles moist sand. Add water, one big tablespoon atatime until the dough comes together. Please just take your time! Divide the soft dough into two balls, flatten each intoadisc, wrap each disc in plastic wrap, and refrigerate while you make the juicy filling.
2. To make the juiciest filling: Heat3tablespoons of mouth-watering butter ina12-inches nonstick skillet over moderate heat until foam subsides, then add the sweet cherries and 3/4 cup sugar (you could use some sugar), and simmer, stirring, until sugar is dissolved. Continue to simmer until cherries are tender but not falling apart, about 8 minutes. Stir together water and cornstarch to foamathick paste, then stir into simmering filling and boil, stirring frequently,2minutes set aside to cool slightly. This pie is gonna hit that sweet tooth, boy.
3. Preheat oven toasweltering 375 degrees.
4. Roll one disc of dough into an 11-inch round, and fit intoa9-inch pie plate, spread the filling into the pie shell, and seductively weaveafew pastry strips to foamalattice on top. Trim the curst decoratively.
5. Bake until the pastry is golden, and the filling is bubbling. About 1 hour, once it’ fresh out the oven, cool the pie completely in pan onarack, 1 and 1/2 to2hours, to allow juices to thicken before serving. Calm those hungry eyes.
6. Bon Appétit, Baby!
Shop the ingredients and everything you need from Shop Mart of the Shop App HERE!
Bon AppétitCherry PieDarazDaraz MMDaraz MyanmarKaty PerryRecipeShop AppShop App MMShop MartShop MMshop.com.mmWorld's Best Cherry Pie
Previous ArticleGamers များအတွက် ဇိမ်ကျစေမယ့် အကောင်းဆုံးအဖော်မွန်Next ArticleShop App ရဲ့ ဘယ် Social Media တွေကနေ ဘယ်လိုပရိုမိုးရှင်း အကျိုးခံစားခွင့်တွေရရှိနိုင်မလဲ?